iPhone 4 | IPhone nhau
El iPhone 4 Ndiyo chizvarwa chechina iPhone, sekuratidzwa kwezita rayo. Yakaburitswa muna Chikumi 24, 2010. Kekutanga nguva patinoona a yakakura dhizaini dhizaini, yakatwasuka maumbirwo uye zvemhando yepamusoro zvinhu senge girazi nesimbi. Yakaburitswa mwedzi mishoma isati yaburitswa nekuti mushandi weApple akaikanganwa mubhawa. Yakakurumbira yaive yake antenna dambudziko. Nemhando iyi ye iPhone yakauya yakawanda kuIOS uye yakakwira tsananguro yeRetina kuratidza. Iyo ine 5 Megapixel yekumashure kamera uye pamberi VGA kamera, 512 MB ye RAM uye 800 MHz processor.Inowanikwa mutema nechena ine masimba e16 ne32 GB, kunyangwe iyo chena modhi yakanonoka nezvinetso nekamera uye nechiedza. kubuda.
Iyo iPhone diki pane ina yakapfuura nemusoro waSteve Jobs
kubudikidza Jordi Gimenez inoita 10 mwedzi .
Hazvishamise kuti Apple yakaronga mumazuva iwayo eiyo iPhone 4 kuvhurwa kweiyo diki modhi ...
Kunyangwe ini ndiri iye zvino mushandisi anogutsikana weApple's smartphone, ndinofanira kubvuma kuti izvi zvaisave zvakadaro nguva dzose. Kunyangwe ndaigara ndichiziva ...
kubudikidza Miguel Hernandez inoita 6 makore .
Iyo ndeimwe yeakanakisa uye akasarudzika mafoni munhoroondo. Akaunza iyo shanduko kune dhizaini yefoni, ...
Apple inobvisa iPhone 4 kubva kuIndia, mwedzi mina mushure mekuimisazve
kubudikidza Jose Azambuya inoita 8 makore .
MunaNdira takakuudza kuti Apple yaizozivisa zvakare iyo iPhone 4 muIndia mushure mekuibvisa kubva ...
iOS 7.1 inovandudza mashandiro pane iPhone 4 uye inosanganisira HFP odhiyo protocol
kubudikidza Carmen rodriguez inoita 8 makore .
Apple yakaburitsa iOS 7.1 nezuro, yekutanga yekuvandudza nhare kune nhare yekushandisa, sezvo yakagadzirwazve gore rapfuura….
Apple inoronga kusunungura zvekare iyo 4Gb iPhone 8 muIndia
kubudikidza Alex Ruiz inoita 8 makore .
Apple ingadai iri kuronga kuisa yayo 4Gb iPhone 8 kutengeswa kuIndia nekuda kwe ...
iPhone 4, inodiwa muUS pakati pevaya vanotenga yavo yekutanga smartphone
kubudikidza Pablo ortega inoita 9 makore .
Iyo iPhone 4 ndiyo inofarira foni muUnited States pakati peavo vatengi avo vanotenga yavo yekutanga smartphone. Ichi chi…
Apple inotumira macheki kune avo vanobatwa nedambudziko reiyo antenna muiyo iPhone 4
Nyaya iyi yakaita kunge yakanganikwa asi mazuva ano inomukazve. Hatina kumbove nenhau kweanopfuura gore ...
Yepamutemo iPhone 4 / 4S yekugadzirisa zvinyorwa zvakavuza
kubudikidza Nacho inoita 9 makore .
Kunyangwe pamambure paine akawanda manyore uye mavhidhiyo tutorials kugadzirisa iyo iPhone (ini ndinokurudzira iyo iFixit), Apple zvakare ...
Kazhinji iPhone 4 prototype inoonekwa paBay
kubudikidza Nacho inoita 10 makore .
Pese apa uye ipapo tinoona zvimwe zvisingawanzo Apple zvigadzirwa paBay. Yakanga iri nguva pfupi auction ...
Apple inoenderera ichitsiva iPhone 4 mayuniti ne iPhone 4S
Iyo iPhone 4 yezvinetso zvemasheya ari kupararira kune mamwe mamodheru uye Genius Mabhawa anomanikidzwa ku ...